Muraayadihii ama okiyaalihii uu xiran jiray halgamaagii reer Inida ee Mahatma Gandhi, midkood ayaa lagu xaraashay lacag dhan 340 kun oo doollar.
Adrew Stowe oo ka tirsan shirkaddaa xaraashka agabka qadiimka ah ayaa sheegay in ay tahay wixii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhd shirkaddaas.
Wuxuu sheegay in qofkii lahaa muraayaddaa ” wadnuhu is taagi gaadhay” markii loo sheegay qiimaha muraayadda. Wuxuu qofkani sheegay in lacagta uu ka helo xaraashka okiyaalah uu u kala qeybin doona gabdhihiisa.
”Qof ayaa noogu soo diray boosta Jimcihii, oo waxay iskaga jirtay ilaa Isniintii. Mid ka mid ah shaqaalahayaga ayaa bashqadda ii dhiibay oo igu yidhi waxa laa socda qoraal sheegaya in ay tahay muraayaddii Gandhi”, ayuu yidhi Stowe.